स्वास्थ्य विभाग भन्छ- ‘खोपका लागि सिरिन्ज अभाव छैन’- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
स्वास्थ्य विभाग भन्छ- ‘खोपका लागि सिरिन्ज अभाव छैन’
देशभर ७१ लाख ३० हजार १२९ डोज खोप भण्डारमा, शनिबारसम्म ७० लाखभन्दा बढी सिरिन्ज जम्मा हुने
माघ ७, २०७८ बुनु थारु
काठमाडौँ — केही दिनयता कोभिडविरुद्ध खोप लगाउनेको चाप बढे पनि सिरिन्जको अभाव नभएको स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्ट पारेको छ । विभागका अनुसार देशभर ७१ लाख ३० हजार १२९ डोज खोप भण्डारणमा छ ।
जसमा भेरोसेल ८ लाख ४४ हजार १५७, जान्सेन ८ लाख ७२ हजार १५०, कोभिसिल्ड ३९ लाख ७६ हजार ६८०, फाइजर ३ लाख ५४ हजार ४०२ र मोडर्ना १० लाख ८२ हजार ७४० खोप भण्डारमा रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सिरिन्ज भने हाल २६ लाख २३ हजार ४ सय भण्डार छ ।
थप सिरिन्ज आउने क्रममा रहेकाले शनिबारसम्म ७० लाखभन्दा बढी सिरिन्ज भण्डारमा जम्मा हुने विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले बताए । ‘युनिसेफमार्फत आजै १२ लाख ९६ हजार सिरिन्ज प्राप्त गर्‍यौं, साथै खरिद गरेको १० लाख पनि हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘चीन सरकारबाट आएको सहयोगको २० लाख भन्सार प्रक्रियाका लागि रसुवा नाकामा छ, त्यो भोलिसम्म आइपुग्नेछ । सबै गर्दा हामीँसग ७० लाख सिरिन्ज हुनेछन्, त्यसैले अभाव हुँदैन ।’
डा. मरासिनीका अनुसार सरकारले खरिद गरेको २ करोड सिरिन्जमध्येको १० लाख आइसकेको छ । पहिलो चरणमा ५० लाखवटा सिरिन्ज पनि एक सातामा आइपुग्ने उनले बताए । ‘खरिदको बाँकी १ करोड ५० लाख सिरिन्ज त पाइपलाइनमै भएकाले खोपका लागि सिरिन्जको समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।
कुन प्रदेशमा खोप र सिरिन्ज कहाँ कति ?
स्रोतः स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा
अहिले दैनिक अधिकतम ३ लाखसम्मले खोप लगाइरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अनुदान र खरिद गरी ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८४० मात्रा खोप प्राप्त भएको छ । जसमा २ करोड ८७ लाख ३३ हजार ८३ मात्रा लगाइसकिएको छ । शुक्रबारसम्म कुल जनसंख्याको ५३.३ प्रतिशतले एक मात्रा र ४२ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी लक्षित जनसंख्याको ८१.३ प्रतिशतले एक मात्रा र ६४ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएका छन् । अतिरिक्त मात्रा भने ५० हजार २०७ जनाले लगाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १८:०४
माघ ७, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर/बिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सरोकारवाला निकायहरूसँग सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने बताएका छन् ।
बरु सवारी साधन कम चलेमा यातायातका साधनमा यात्रुहरूको भीड हुने भन्दै व्यवसायी जोरबिजोर प्रणालीको विपक्षमा रहेका हुन् । यद्यपी सरकारले गरेको निर्णय आफूहरूले मान्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू नगर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको बताए । सार्वजनिक सवारीको सट्टा निजी सवारी साधनलाई रोक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
जोरबिजोर चल्दा सवारी साधन कम चल्ने र यात्रुको भीड बढ्ने उनले बताए । उनले यो प्रणालीले सवारी साधन जरिवानाको निशानामा पर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी व्यवसायीले ट्याक्सी र पर्यटकीय बसलाई पनि जोरबिजोर लागू गर्नु नहुने सुझाव दिएको महासचिव सिटौलाले बताए ।
कोरोना संक्रमणदर बढ्न थालेपछि बिहीबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १८:००
सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरिने
‘डिजिटल हेल्थ’ कार्यान्वयनमा ल्याइने
स्वदेशमै खोप निर्माण गर्ने नीति ल्याइने
२ दिने बिदाले ओपीडीमा थामिनसक्नु भीड
स्पेनमा महिलालाई महिनावारी बिदा दिने कानुन प्रस्ताव
कपाल प्रत्यारोपणबारे जान्नुपर्ने केही कुरा
डा. प्रज्वल पुडासैनी